Izinyathelo Eziyi-12 Zokwakha Isidingo Senkampani Yakho Entsha Martech Zone
Izinyathelo eziyi-12 Zokwakha Isidingo se-ejensi yakho entsha
ULwesine, April 2, 2015 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Isonto eledlule bekuyisonto elimangalisayo ngo- Umhlaba Wezokumaketha Kwezenhlalo lapho engikhulume khona ngesihloko esithi I-Influencer Marketing. Ngenkathi ababukeli beyizinhlangano eziningi befuna izeluleko zokuthi zingasetshenziswa kanjani isu eliphumelelayo, ngabuyela ekhaya futhi ngaba nombuzo omuhle komunye wababekhona owayefuna ukwazi ukuthi ngilakha kanjani ithonya elanele nokufuna ukuqala inkampani yami.
Ngifuna ukwazi ukuthi ngingaqala kanjani ukuthola amaklayenti (akhokhelayo) ukuze nginikeze ukubonisana nokuqeqesha… ngokuhlola lokho abanakho njengamanje, bese nginikela ngamasu, izixazululo, amathiphu kanye nemikhuba emihle. Ngiyazi ukuthi ukubhuloga, izincwadi, ama-e-book, ama-webinar, namavidiyo yizindawo ezinhle zokuqala. Ngiqale kuphi ukuba wedwa futhi ngithola kanjani ukuthi ibhizinisi lami likhule ngokwanele ukuze ngikwazi ukulenza ngokugcwele?
Ngakho-ke, ngenzeni ukuze ngiqale umsebenzi wami futhi bengingakwenza kanjani ngokwehlukile?
Inethiwekhi yakho - Ibhizinisi lakho alincikile kwisikolo sakho seKlout, inani labalandeli onalo, noma amazinga osesho lwakho. Ekugcineni, ibhizinisi lakho lizophumelela ngokuya ngokutshalwa kwemali okwenzayo ekwandiseni nasekwakheni ubudlelwano bomuntu siqu nenethiwekhi yakho ebonakalayo. Lokho akusho ukuthi ezenhlalo azinandaba, kumane nje kusho ukuthi ezenhlalo ngeke zibaluleke uze ukwazi ukuxhumana ngokwakho nalabo abakolunye uhlangothi lwekhibhodi.
Ibhulogi yeNiche - wonke umuntu wayekhuluma ngemidiya eku-inthanethi ngesikhathi ngiqala ibhulogi yami, kepha akekho owayekhuluma ngqo ngezixazululo ezitholakalayo zokusiza abathengisi. Lokho bekunguthando lwami ngempela… ngisebenzile kwisoftware njengomkhakha wezinsizakalo futhi ngihlwaya i-Intanethi kokulandelayo, ngase ngiba yinsizwa yethuluzi lenethiwekhi yami. Kwakungekho enye ibhulogi laphaya ngakho ngaqala eyami. Uma bengingaphinda ngikwenze futhi, bengingaya ngokuqina ngesihloko sami, i-geography, noma ukugxila kwemboni.
Umphakathi - Ngivakashele, ngaphawula, nganyusa, ngabelana futhi nganikeza impendulo kwabanye abaholi emphakathini. Kwesinye isikhathi bengiphuma nazo zonke izinkulumompikiswano nabo, kepha engangigxila kukho kwakuhlala kungukufaka inani phambi kwabo ngenkathi ngazisa igama lami laphaya. Indlela enhle yokwenza lokhu kulezi zinsuku ukuqala i-podcast nokuxoxisana nabaholi abakule mboni ongathanda ukusebenzisana nabo noma ukuyenzela.
Okhulumayo - Imidiya yedijithali ayanele (hlala!) Ngakho-ke kufanele uhambe ucindezele inyama. Ngizinikele ukukhuluma yonke indawo endaweni nasezweni lonke. Ngiqhubekile ngathuthukisa amakhono ami okukhuluma, amakhono okubhala (ungaphikisa lokho) namakhono ami okwethula. Uma ngikhuluma emcimbini, ngithola ukuhola okungaphezulu kwetoni kunokubhuloga nje. Kodwa-ke, ngidinga ukugcina ukubhuloga ukuze ngithole ithuba lokukhuluma ngakho akuyona eyodwa noma enye. Futhi isikhathi ngasinye lapho ngikhuluma, ngangiba ngcono kancane kunangesikhathi sokugcina. Khuluma yonke indawo nakuwo wonke umuntu!
Ukuqondisa - Kunezinkampani eziyishumi nambili engifuna ukusebenza nazo futhi ngiyazazi ukuthi zingobani, engidinga ukuhlangana nazo, futhi ngakha izinhlelo zokuthi ngizohlangana kanjani nazo. Kwesinye isikhathi kudlula osebenza naye onoxhumano ku-LinkedIn, kwesinye isikhathi ngibacela ukuthi baphuze ikhofi, futhi kwesinye isikhathi ngicela ukubabuza i-podcast yethu noma ngibameme ukuthi babhalele izilaleli zethu. Angikubizi lokho kuthengisa (mhlawumbe ukulandela), kepha kuhlangana nabo ukubona ukuthi singafanela yini inhlangano yabo futhi okuphambene nalokho.
Ukusiza - Nomaphi lapho ngangikwazi khona, ngangisiza abantu ngingalindele ukukhokhelwa. Ngibakhuthazile, ngaphatha okuqukethwe okuhlanganisiwe ngabelana ngakho, nganika impendulo, futhi ngakhipha konke mahhala. Kufanele ukhumbule ukuthi yize nginga thinta izivakashi ezihlukile eziyizi-100,000, abalaleli, ababukeli, abalaleli, abalandeli, abalandeli, njll. Ngenyanga… bangama-30 noma ngaphezulu kuphela amakhasimende akhokha ngempela. Lokho kusho ukuthi kufanele uzakhele igama, ube nezifundo ezithile zamacala bese ushayela imiphumela kwabanye ukuze uthole umsebenzi. Sizakhele udumo ngokukhangisa okungenayo, amasu alinganisekayo, i-SEO eyinkimbinkimbi yabashicileli abakhulu, futhi igunya lokuqukethwe… Kepha okunye kwaqala ngokusiza abantu ukuthi balungise okuthile okuyisimungulu kuwebhusayithi yabo.
Kubuza - Ukutshela wonke umuntu ukuthi umuhle kangakanani akusebenzi kahle uma uthengisa. Kepha ukubuza wonke umuntu lapho badinga khona usizo kuyindlela engcono kakhulu. Empeleni, emizuzwini embalwa edlule ngifinyelele enkampanini esiyisizile omgwaqo wayo ophindwe ka-10 kunalokho owawuyikho eminyakeni eyi-4 eyedlule futhi ngacela ukuhlangana nabo ukuze ngibone lapho singasiza khona. Kubuza kuyasebenza. Ukuzwa ukuthi yini ithemba noma iklayenti elilwa nayo bese ubona ukuthi ungazisebenzisela izixazululo ezithile kuyindlela ephelele yokungena nenkampani. Qala ngokuncane, uzibonakalise, bese uhlanganyela ujule futhi ujule.
Ukuzikhuthaza - Kuyinto icky… kodwa kudingekile. Uma uhalaliselwa, wabiwa, ulandelwa, ukhulunywa, noma yini enye ongayazi - lokho kungukuqinisekiswa okuhle kobuchwepheshe bakho. Angiphenduki ngokuphelele ngokwazisa okushiwo abanye ngami. Angikunxusi ngenkuthalo wonke umuntu ukuthi akwenze, kepha uma kuvela ithuba futhi othile angincoma, ngingabacela ukuthi balibeke ku-inthanethi.
Bheka Ochwepheshe - Isizinda esifanele, ikheli le-imeyili esizindeni sakho (hhayi @gmail), ikheli lasehhovisi, izithombe zobuchwepheshe, ilogo yesimanje, iwebhusayithi enhle, amakhadi webhizinisi ahlukile… konke lokhu akuzona nje izindleko zebhizinisi. Zonke izindleko zokukhangisa nezimpawu zokwethembeka. Uma ngibona ikheli le-gmail, anginasiqiniseko sokuthi uzimisele. Uma ngingaliboni ikheli nenombolo yocingo, angazi noma uzoba yini ibhizinisi ngeviki elizayo. Ukuqashwa kumayelana nokwethembana futhi zonke izindleko ezibhekwa ngaphandle ziyinto yokwethembana.
Bhala incwadi - Noma ngabe okuthengiswayo okuwukuphela kwakho wena nomama wakho, ukubhala incwadi kukhombisa ukuthi noma ngabe iyiphi imboni okuyo, uyihlaziye kahle futhi uzakhele isu lakho elihlukile lokusebenza kuyo. Ngaphambi kokuba ngibe ngumbhali, bengingasitholi isikhathi sosuku kwezinye izingqungquthela noma amaklayenti. Ngemuva kokuba sengingumbhali, abantu bebenikela ngokungikhokhela ukuze ngikhulume nabo. Kubukeka kuwubuwula, kepha kungenye into ozimisele ngayo ngomkhakha wakho.
Qala Ibhizinisi Lakho - Ayikho imali eyanele futhi asikho isikhathi esingcono sokuqala ibhizinisi kunamanje. Wonke umuntu ocabanga ngakho ucabanga ukuthi uyakudinga lokhu, uyakudinga lokho, ulinde enye into eyodwa, njll. Uze uziphumele wedwa futhi uzwe lowo muzwa omubi emgodini wesisu sakho okwenza ukuthi ulambe ngokwanele ukuba uyozingela - uzohlala khona lapho okhona. Indodana yami yayiqala ekolishi futhi ngangifile lapho ngiqala khona DK New Media. Kwaphela amasonto ngingalala etafuleni lami ngenza imisebenzi engajwayelekile ukuze ngikwazi ukondla abantu… futhi ngafunda ukulungiselela kangcono, ukumaketha kangcono, ukuthengisa kangcono, ukuvala kangcono, futhi ekugcineni ngakhe ibhizinisi lami. Ubuhlungu buyisisusa esihle soshintsho.
Value - Ungagxili kulokho okukhokhisayo noma ukuthi wenza malini, gxila kunani oliletha kwabanye. Ngibheka abanye abantu abalinganisela ngokuya ngamahora asetshenziwe bese bephuka. Ngibuka abanye bekhokhisa ngakho-ke bathatha imali futhi bahlala befuna amaklayenti amasha. Akuphelele, kepha sigxila kunani esililetha kumakhasimende ethu bese sibeka isabelomali esingabizi futhi esizuzisayo. Kwesinye isikhathi kusho ukuthi senza ushintsho oluncane oluholela emalini eningi, kwesinye isikhathi kusho ukuthi sisebenza imisila yethu ukulungisa amaphutha ethu ngaphandle kwendibilishi. Kepha lapho amaklayenti ebona inani olilethayo, awacabangi ngokuthi ubiza malini.
Akukho kulokhu, kunjalo, okubikezela impumelelo yakho. Sibe neminyaka emikhulu futhi saba neminyaka eyinhlekelele - kepha ngijabulele yonke eyodwa yayo. Ngokuhamba kwesikhathi sithuthukise umuzwa wezinhlobo zamaklayenti esisebenza kahle nawo namanye okufanele siwathumele. Uzokwenza amaphutha amakhulu - funda nje bese uqhubeka.
Ithemba lokhu kusiza!
Mayelana DK New Media
DK New Media iyinhlangano entsha yezindaba egxile kwezentengiso ezisebenza nge-agile neqembu lezazi zokumaketha nezobuchwepheshe. Nethimba labo lochwepheshe beziteshi ze-omni kuwo wonke ama-mediums digital, DK New Media unomgomo wokwethula nokuguqula ubukhona beklayenti online ukukhulisa isabelo semakethe, ukuhola umkhondo nokwenza ngcono izingxoxo zabo online. I-DK ikhulise ukwabiwa kwezimakethe kuwo wonke amaklayenti abesebenze nawo futhi inekhono ikakhulukazi ezinkampanini ezisebenza ngobuchwepheshe bokumaketha njengoba inabalaleli abaningi kule ncwadi. DK New Media ikomkhulu lokuziqhenya enkabeni ye-Indianapolis.
Tags: mayelana dk new mediaagencyukubuzaibhulogiumphakathiDK New Mediadouglas karrngisizaukuthi ungaqala kanjani i-ejensiInethiwekhiukuxhumanaUkukhuthazwaukuzikhuthazaOkhulumayoqala i-ejensiInani
Izindikimba ezihamba phambili ze-WordPress
Ukukhangisa Kwakho Nje
Ngo-Apr 2, i-2015 ku-9: 57 AM
Ngiyabonga kakhulu ngokuthatha isikhathi sakho ukubhala lo mbhalo. Lokhu yilokho wonke umnikazi webhizinisi adinga ukukuzwa, noma ngabe ukuqala kwabo noma sebeneminyaka sebhizinisi. Sonke sinenkinga futhi sifuna izeluleko zokuthi sifeze kanjani izinhloso zethu. Ngikujabulele kakhulu ukuthi ubuqotho kanjani futhi ngatshela ubufakazi bakho. Ngizobe ngabelana ngalo mbhalo futhi abafundi bakho bakwenza.
Ngo-Apr 2, i-2015 ku-5: i-03 PM
Lindokuhle ndlovu (@lindokuhlendlovu)
Ngo-Apr 2, i-2015 ku-4: i-32 PM
Ngizofaka eyodwa. Yiba umngane omkhulu. Yilokho okwenzile. Siyabonga ngokuba umngane futhi siyakuhalalisela ngomunye unyaka!
Ngiyabonga kakhulu, Tim! Igagasi elikhulayo, eh?
Ngo-Apr 14, i-2015 ku-6: 29 AM
sawubona doug, ngiyabonga ngale ndatshana ecacile nenembile, ngiqala inkampani yami yezentengiso yedijithali eTogo futhi izeluleko zakho ziyimigoqo yegolide